Zvishandiso zvinobatsira zvevanamuzvinabhizimusi. Kugadzirwa kwemashopu ewebhu | Linux Vakapindwa muropa
Zvishandiso zvinobatsira zvevanamuzvinabhizimusi. Kugadzirwa kwee-commerce saiti
Mukati Me Nyaya yapfuura Akange atsanangura vemabhizimusi sevanhu vanotsvaga kuita purofiti nekugadzira mhinduro kune vatengi vavo. Ini zvakare ndakataura kuti iyo yegore-yakavakirwa sevhisi zvinopihwa izvo zvinotsvaga kufambisa mabasa avo zviri kuwanda.
Mune mawonero angu, kunyange akawanda emidziyo iyi achichengetedza mutengo uye nenguva, mukufamba kwenguva zviri nani kusarudza mhinduro dzakavhurika (zvese zvinoshandiswa zvakaiswa pakombuta yedu uye zvakaiswa pamaseva anotarisirwa nesu). Iyo nguva irasikirwe nekudzidza mashandisiro ayo uye mukumisikidza, inozotorwa gare gare
Ehe nKana iri nyaya yemuvambi wekutanga uyo chinangwa chake chekuva kambani hombe zvakafanana nemunhu anongoda mari yekuwedzera munguva yavo yekusarudzika. Muchiitiko chekupedzisira, mabhenefiti eakavhurika sosi anogona kuderedzwa.
1 Zvishandiso zvinobatsira zvevanamuzvinabhizimusi. Dhizaini webhusaiti
1.1 Kushandisa mapuratifomu ekugadzira e-commerce saiti.
1.2 Zvemukati mamaneja
1.3 Zvisikwa kubva pakutanga
Zvishandiso zvinobatsira zvevanamuzvinabhizimusi. Dhizaini webhusaiti
Muna Kurume wegore rino, panguva yehurukuro ineshungu pamusoro peanogamuchira webhusaiti network, mumwe munhu akashamisika
Chii chingangoda chitoro chemunharaunda chingade webhusaiti?
Mazuva gumi nemashanu gare gare, hurumende yeArgentina yakaraira imwe yeakareba uye akaomarara kuvharirwa ari pasi rese ayo aisanganisira kuvharwa kwemabhizimusi asina kukosha kwemwedzi uye chete kutengesa kwepamhepo kwakabvumidzwa. Ndofunga munhu iyeye atoziva mhinduro.
Kana paine chinhu chaidikanwa kuparadza ngano yekuti masocial network uye epasi rese e-commerce mapuratifomu akadai seEbay, Amazon kana Mercado Libre vanga vasiya basa kumawebhusaiti zvachose, Covid-19 akasvika.
Vaya vakatanga kutengesa online vakawana izvo Dai vasina kuisa mari mukushambadzira sevakwikwidzi vavo, ivo vaisave nekuonekwa kumwe chete. Uye, ngatiregei kutaura pamusoro pekuti vakakwikwidza zvigadzirwa zvakafanana neizvo zvinopihwa nemapuratifomu akafanana. Zvakare, mune dzakawanda zviitiko makomisheni akachajiswa nemamwe emapuratifomu anoita kuti zvisave nyore kuti vatengesi vadiki vawane purofiti.
Unofanira kuzvijekesa Masocial network uye e-commerce mapuratifomu ndiyo hoko iyo inotibvumidza isu kuti titore vatengi uye tivaendese kune yedu webhusaiti kwatinofanira kuvapa ivo nezviitiko uye masevhisi anoita kuti vade kudzoka.
Nezvo zvataurwa, tichifunga kuti hatisi kuzobatira nyanzvi yewebhu dhizaini, isu tine matatu marudzi enzira dzekugadzira mawebhusaiti.
Kushandisa mapuratifomu ekugadzira e-commerce saiti.
Kushandisa kwemaneja maneja
Zvisikwa kubva pakutanga.
Aya mapuratifomu bvumira kugadzirwa kwehunyanzvi hwemhando yepamusoro e-commerce saiti nekungozadza mashoma mafomu uye kusarudza template. Iwe unogona zvakare kushandisa yakasarudzika dhatabhesi uye nekuregeredza yakaoma magadziriso uye kugadzirisa.
Kubva pakuona kwangu, ipuratifomu yakanaka yaunogona kusarudza ndeye WooCommerce. Uye kwete chete nekuti chikamu chezvaunobhadharira sevhisi chinoenda kunopa mari iyo WordPress yakavhurwa sosi chirongwa, panguva ino iva wakagadzirira kutarisira kubata kwako WooCommerce chitoro pane yako wega server, kutumira kunze kunoitwa pasina matambudziko.
Zvemukati mamaneja vanokutendera iwe kuti uparadzanise dhizaini basa kubva kune zvemukati Kana maneja wezvemukati waiswa pane sevha, iwe unongofanirwa kuzadza iyo rakakumbirwa dhata uye sarudza graphic theme. Uye zvakare, mamaneja emukati anotarisana nekutengesa zvemagetsi ane sarudzo dzekuwedzera dzinovatendera kuti vawedzere mashandiro avo.
Kuve unochinjika (uye nekufamba kwenguva) yakachipa pane epuratifomu yekugadzira saiti, ivo vane sevashambadziro izvo zvinoita kuti zvive zvakakosha kubhadhara zvachose kuvandudzwa uye kuchengetedzeka
Vamwe vanokurudzira zvemukati mamaneja ndeaya:
WooCommerce: Inoshanda about WordPress, zvemukati maneja zvinoshandiswa neinenge 30% yewebhusaiti. Inogadziriswa zvikuru uye inobvumira kutengeswa kwezvose zviri zviviri uye zvigadzirwa zvemadhijitari. Iyo inosangana pamwe neayo makuru ekuunganidza mapuratifomu munyika.
Kuve wakakurumbira zvakadaro, une mukana wepamusoro wekutariswa nevapambi vemakomputa
MVhura Sosi mumiriri: Magento inonyanya kufarirwa e-commerce papuratifomu mune yemakambani nyika uye ikozvino yave yeAdobe. Mune ino kesi isu eTiri kureva vhezheni yeprojekti inotsigirwa nharaunda uye izvo zvinogona kuzvibata pachako pane yedu server. Inoenderana nezvitoro zveese saizi uye inobvumidza kuitiswa kwesarudzo dzakasiyana dzekuunganidza uye manejimendi ezvitoro nevatengi.
osCommerce: Mune ino kesi iri maneja wezvemukati kuitisa pane yedu yega server kunyangwe iine zvibvumirano nevatambi vanogashira iyo inogonesa kuiswa kwayo. Iko kune zvakare nharaunda vhezheni ine yekuwedzera maficha akagadzirwa nevechitatu mapato. Pamusoro pekusanganisira katarogu, kubhadharisa, kuunganidza uye manejimendi manejimendi maficha, ine akawanda ekuwedzera-mairi uye inosanganisirwa zvisina mushe neakasiyana-matatu masevhisi masevhisi senge epasi rose ekubhadhara masisitimu, dhizaini, kushambadzira uye pasocial network.
Zvisikwa kubva pakutanga
Munyika yakanaka iyi ndiyo ichava mhinduro yangu yandaida Vemukati mamaneja vane zvinhu zvakawanda zvausingazomboshandisa, uye kugadzira yako saiti kubva pakutanga inokutendera iwe kuigadziridza kune zvaunoda uye nekuvandudza iyo nenzira inobatsira. Zvino, Kana iwe uine nguva yekuzviita (kunze kwekunge bhizimusi rako richigadzira e-commerce mhinduro kubva pakutanga) zvirokwazvo uri kuita chimwe chinhu chisina kunaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvishandiso zvinobatsira zvevanamuzvinabhizimusi. Kugadzirwa kwee-commerce saiti
Firefox Reality 12 inosvika nerutsigiro rwekuwedzera, auto-yakazara uye nezvimwe
Chromium inogona kuiswa paLinux Mint isina snapd zviri pamutemo, Ulyssa (20.1) anosvika pamberi peKisimusi